Soosaarayaasha Xannaaneeyayaasha Guryaha & Shirkadaha - Warshadda Daryeelka Guryaha Shiinaha
i Hawo-hawo hawo-la’aan (COPD Therapy)
Qaabdhismeedka neefsashada badan ayaa bixiya xulashooyin badan Sepray I taxanaha ah ayaa ku dhuftay hababka neefsashada ： CPAP, S, T, iyo S / T, VAT iyo PC si ay ula kulmaan bukaannada baahiyo kala duwan. Qaabka 'S / T' wuxuu si gaar ah ugu yahay bukaanka COPD iyo II ee bukaanka ku dhaca dhuumaha neefsashada, si ay u keenaan waayo-aragnimo neefsasho oo dabiici ah oo dheellitiran. Habka VAT waxaa loogu talagalay bukaanka qaba COPD, buurnida buurnaanta buurnida iyo mugga mugga hooseeya. Qaabka PC-ga waxaa loogu talagalay bukaannada leh heerka neefsashada deg-degga ah, mugga hooseeya iyo hypoxemia. Xaddiga cadaadiska waa 4-30cm H2O. Sare ka hor ...
Heerka-hawada-aan-ku-dirirka ahayn ST-30F
Daraasad caafimaad ayaa muujisay bukaanka COPD ee leh daaweynta heerka-hawada ee hawo-mareenka ah ee guriga si wax ku ool ah u fiicnaan kara
astaamaha hypoxia iyo kaarboon haaydhka haaydh-haaydhka, Sepray ST-30F waxay bixisaa xalal fara badan oo loogu talagalay neefsashada.
bukaanka ku filnaansho.
Heerka-hawada-aan-ku-dirirka ahayn ST-30D
Quality Heerka darajada tayada leh pressureHigher cadaadiska －Shaqaalaha ugu qiimaha badan xirfad badan study Daraasad cilmi baaris caafimaad oo dhameystiran ayaa muujineysa bukaanka COPD ee leh daweynta hawo-maareynta hawo-maareynta guriga waxay si wax ku ool ah u hagaajin karaan astaamaha hypoxia iyo haynta kaarboon-haaydhka, Sepray ST-30D noocyo badan oo xalal ah oo loogu talagalay bukaanka ku filnaanshaha neefsashada. Selambar ST-30D ayaa lagu dabaqi karaa kuwan soo socda ee daaweynta cudurrada kala duwan iyo daryeelka ： COPD, Cudurrada neerfayaasha 'ul Pulmonary fibrosis, ...